6 Waxyaabood oo adiga kugu saabsan oo Lamaantaada ay u sheegto saaxiibadeed balse ay inkirto - Aayaha
Haweenka had iyo jeer markii ay meel iskugu yimaadaan waxaa dhex marta sheeko gaar ahaan xilliyada ay fursada isku helaan gaar ahaan in laga sheekeeyo xiriirka kala dhexeeya seygeeda ama saaxiibkeed.
Waxaa macquul ah inay noqoto arrimaha jaceylka ama ay talo iska siiyaan xiriirka kala dhexeeya ragga ay saaxiibada la yihiin.
Waa kuwaan hoos ka aqriso 6 waxyaabood oo gabadha saaxiibtaa ah ay u sheegtay saaxiibadeed balse aysan marnaba qiraneyn inay sameysay.
Inay kula meel dhigto nin ay horey u jecleyd ama u qabay balse ay kala tageen.
Qofna ma jecla in lala bar bardhigo qof kale balse tan micnaheeda ma ahan injay six un kuula meel dhigeyso qof ay horey nolosha usoo wadaageen adiga kahor.
Waxaa dhab noqon karta inay kuula bar bar dhigeyso wanaagga aad qabto balse uusan marnaba lahayn ninkii ay horey usoo kala tageen waxayna taasi tahay mid ay kugu amaaneyso.
Haa haddii aad si fiican shiishka ula heshid oo shaqada aad si fiican u cabtid waxay usoo bandhigeeysaa saaxiibadeed balse haddii aad dhankaas ka liidatid oo aadan shaqa cabidda sariirta aadan ku fiicneyn hadde iyadana wey la wadaageysaa saaxiibadeed.
Inkastoo aysan arrintaan dumarka kawada sinneyn balse waxay ku imaaneysaa markii ay sheekada tagto in laga hadlo ciyaaraha sariirta.
Waxa ay ka aaminsantahay saaxiibadaa iyo qoyskaaga
Xaaskaaga waa hubaal inay saaxiibadeed u sheegtay waxa sida ay yihiin qoyskaaga iyo saaxiibadaa iyo waxa ay ka aaminsantahay, haddii aysan jecleyn walaalkaa ama uu saaxiibkaa xunyahay kuuma sheegeyso adiga balse waxaa macquul ah inay kalsooni ku qabto saaxiibadeed marka adiga la eego.
Nooca nolosha aad wadaageysaan labadiina
Saaxiibtaa ama xaaskaaga waxay u badantahay inay saaxiibadeed kala hadasho nolosha aad wadaageysaan marka aad isla joogtaan ama wadajir tihiin, mana ahan taasi inaad lacag badan u heysid iyada si ay kuula joogto.
Inay diyaar u tahay inay saldhigato
Waxay noqon kartaa inaad ka sheekeysaneyseen arrimaha guurka isla markaana ay iyadana dooneyn inay kugu wareeriso wax badan oo su’aalo ahiyo sheekooyin ku saabsan guurka, arrintaas dadka ugu horeeya ee ay kala hadli doonto waa saaxiibadeed.
Wax kasta ood si sax ah u sameysid
Naag kasta aad ayay u jeclaan lahayd inay ka hadasho waxyaabaha layaabka leh ee uu ninkooda ama saaxiibkood u sameeyo ama u qabto, haddii aad si wanaagsan ula dhaqmeysay ood niyadda u dhiseysay isla markaana aad ka farxin jirtay waxay kugu amaaneysaa howshaas waqtiyo farabadan.